छोरीलाई बाबुले मोबाइलमा नराम्रो भिडियो देखाउदै गरे करणी-भिडियो सहित - सुदुर नेपाल
छोरीलाई बाबुले मोबाइलमा नराम्रो भिडियो देखाउदै गरे करणी-भिडियो सहित
काठमाडौं । आफैले जन्मदिएको छोरीलाई बाबुले नै अनैतिक काम गरेको देखेपछि सहन नसकेकी आमाले वि ष खाएर देह त्याग गर्ने प्रयास गरेकी छन् । आफ्नै छोरी माथि जाइलागेका श्रीमानलाई प्रहार गरेर कोठामा थुनेर आमा छिमेकीसंग सहयोग माग्न पुगेकी थिइन् । अहिले ति बुवा प्रहरी हिरासतमा छन् । आफ्नै छोरी माथि अनैतिक काम भएको देख्नु पर्यो भन्दै आमा निकै विक्षिप्त बनेकी छन् । आफ्नै परिवारमा सन्तान सुरक्षित रहन सक्दैन भने यो संसारमा कसलाई विश्वास गर्ने ? यो गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । आफ्नै ७ वर्षकी छोरीको करणी प्रयास गरेको अभियोगमा उनका बुवा हिरासतमा पुगेका हुन् । यो घटना पनि नारायणघाटको हो ।छोरी माथि त्यस्तो कुकर्म भएपछि पनि आफुले न्याय नपाएको भन्दै आमा नारायणगढवाट काठमाडौं आएकी छन् । सर्मिला पुरी न्यायका लागि काठमाडौं आएकी हुन् । गएको १४ गते राति संधै झै उनका श्रीमान पसलवाट आए । उनले फलफूल पसल चलाएका थिए । राति सर्मिला थकाई लागेकाले सुतिन् । उनका श्रीमानले पनि तँलाई थकाई लागेको होला सुत भनेर भने ।
पहिला पनि छोरीलाई मोवाइलमा नराम्रो भिडियो देखाउने गरेका थिए । छोरीले आफुलाई बुवाले नराम्रो भिडियो देखाउने गरेको बारे सुनाएकी थिइन् । त्यही भएर सर्मिला त्यो दिन अलि चनाखो भइन् । वास्तवमा के गर्दा रहेछन् भनेर उनले बिचार गरेर सुतेजस्तो गरिन् । ति बाबुले संधै झै छोरीलाई त्यो दिन पनि मोवाइलमा नराम्रो भिडियो देखाए । छोरीले मोवाइलमा भिडियो सार्दै हेर्दै गरेको उनले देखिन् । जव बाबु छोरी तर्फ लम्कदै थिए आमाले त्यो दृष्य पनि देखिन् । छोरीलाई नराम्रो नियतले छुन लागेपछि उनले श्रीमानलाई लात्तिले हानेर पल्टाइन् । अनि श्रीमानलाई ढोकामा थुनेर बाहिर गएर सबैलाई बोलाइन् । छिमेकीलाई प्रहरी बोलाउन आग्रह गरीन् । पछि श्रीमानलाई साँचो लगाएर थुनेर आफै प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् ।छोरीलाई मोवाइलमा नराम्रो भिडियो देखाएको थाहा पाएपछि तिन पटक उनले घर बाहिर निकालिदिएको बताइन् । सर्मिलाले ति ब्यक्तिसंग विवाह गरेर आउँदा छोरी लिएर आएकी थिइन् । आफ्नै सन्तान नभएका कारण त्यस्तो नराम्रो सोच राखेको हुन सक्ने सर्मिलाको भनाई छ । आफुलाई अप्ठेरो परेको बेलामा निकै सहयोग गरेका कारण श्रीमानको निकै माया गरेर पटक पटक सम्झाउदै संगै बस्दै गरेको उनले बताइन् ।
यो भन्दा पहिला उनीहरु पोखरा बस्थे । त्यतीबेला श्रीमानले निकै माया गर्ने गरेका श्रीमान आफ्नै दिदीको कारण ब्यवहार विग्रीएको उनको भनाई छ । मेरो दिदीको कारण मेरो दुईवटा घरबार विग्रियो, अहिले पनि दिदीसंग श्रीमानको सम्पर्क भएपछि यस्तो घटना भएको उनको भनाई छ ।etajakhabar.com
Previous Post: PNYC र जनउद्धार सम्पर्कसमितीद्वारा आयोजित भाग्यसाली उपहार भलिबल, गीत बिमोचन कार्यक्रम सम्पन्न।
Next Post: १७ बर्षिया बिष्णुमायाकाे सपना टुट्यो ! आमालाइ बचाउन सकिनन्, यति धेरै रोइन्, यो कस्तो भाग्य दैव?-भिडियो सहित